LibreOffice haizombofi yakabhadhara, asi chinyorwa chakatyisa nharaunda | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice haizombofi yakabhadharwa, asi chinyorwa chakatyisa nharaunda
Uchida kana kuti kwete, uye ndinoziva kuti vazhinji vevaverengi vedu havaifarire, Microsoft Office ndiyo inonyanya kufarirwa uye yakakosha hofisi suite pasirese. Asi izvo hazvireve kuti hapana zvimwe zvakanaka sarudzo, senge iyo LibreOffice iyo inosanganisira akawanda ekugoverwa kweLinux akaisirwa default. Iyi suite yemahara uye yakavhurwa sosi, izvo zvinoreva zvakare kuti hatifanirwe kubhadhara kuti tishandise, asi yekutanga RC yekubuda kuri kuuya yakaridza maalarm ese.
LibreOffice 7.0 inowanikwa kuyedzwa kweinenge mwedzi miviri, asi chinhu chinonetsa chakaratidza pane yake RC1. Pakarepo, zvaigona kuonekwa kuti iyi vhezheni yaive chakanyorwa kuti "Personal Edition", izvo zvakaita kuti vazhinji vafunge kuti ichave iri shoma uye yakasununguka sarudzo ye suite yatakaziva kubvira payakatangwa muna 2011, pavakaparadzana neOpenOffice. Nhau dzakanaka? Kuti pane chirevo chepamutemo chinotsanangura zvakaitika.
LibreOffice ichagara yakasununguka uye hapana chinoshanduka kune chaicho mushandisi
Mike Saunders weThe Gwaro Foundation, atsanangura inotevera:
Hapana shanduko dzinoongororwa dzinozokanganisa rezinesi, kuwanikwa, kushandiswa kunobvumidzwa uye / kana mashandiro. LibreOffice ichagara iri yemahara software uye hapana chinoshanduka kune vashandisi vekupedzisira, vanogadzira, uye nhengo dzemunharaunda. Nekuda kwenguva pfupi yenguva yatiri kushanda nayo, iyo taki yakaonekwa paRC uye tinokumbira ruregerero kana izvi zvakaita kuti vamwe venyu vafunge kuti isu takaita shanduko unilaterally. Ziva chokwadi kuti kubvunzana nenharaunda kuchiri kuenderera.
Iyi Yega Yega tag tag iri chikamu cheakakura-makore mashanu ekushambadzira chirongwa isu tiri kugadzirira uye inoitirwa kusiyanisa yazvino, yemahara, nharaunda-inotsigirwa munharaunda LibreOffice kubva kune suite yeLibreOffice Enterprise zvigadzirwa uye masevhisi anopihwa nenhengo dzedunhu redu. Iyo yekushambadzira chirongwa ichiri pasi pekuvandudzwa uye hurukuro, saka isu tinotarisira kugamuchira nekuongorora mhinduro yako!
Chinyorwa ichi chinongova chikamu chehurongwa hwekutengesa, ichiri pasi pekukakavadzana, asi panogona kunge paine seti yezvigadzirwa nemasevhisi ayo anouya kubva muruoko rwemitezo yeecosystem pachayo uye iyo yaizotumidzwa zita LibreOffice Enterprise. Nekudaro, zvese mumashoko aSaunders, vhezheni yatinoshandisa zuva nezuva ichagara sezvazviri ikozvino, asi chimwe chinhu chitsva chichaonekwawo kumakambani asati aburitsa, muchidimbu nekuti vachiri kubata nenyaya iyi. . Kufungidzira, rimwe remasevhisi anogona kuverengerwa mune rebhizimusi vhezheni raizove runhare uye / kana e-mail rutsigiro / rubatsiro.
Nezvose izvi, ndichave ndichifara kuverenga zvaunotaura nezvazvo, zvese kuziva kuti unoona sei kufamba uye kuziva zvaunofunga nezvazvo zvingabatsira sei kumakambani kubhadhara neLibreOffice Enterprise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice haizombofi yakabhadharwa, asi chinyorwa chakatyisa nharaunda
Wese munhu anotya kuti «sei! ichabhadharwa here? » "Tinoda kupinda mukodhi" "Ndapota remekedzai rusununguko rwedu." asi taura navo nezve kupa 1 euro uye ivo vese vanyangarika, software yacho inomira yega? vagadziri havadyi? usabhadhara internet?
Ini handifunge kuti pane chakaipa kana chirongwa chikabvunza sarudzo yekubhadhara. Ivo havagare pamhepo.
Ini ndinobvuma zvizere kuti hwaro hunopa bhizimusi shanduro yekutsigira iyo. Chirongwa. Sezvo mipiro iri mishoma
Nyaya chaidzo dze linux. Kunyangwe zvavo vasingaite senge
Linux, iyo kernel, zvakare inogadzirira kushandisa mutauro wezvematongerwo enyika